अन्ततः अख्तियारले ठूलो माछा भेटाएकै हो त ? « New 24 Nepal
अन्ततः अख्तियारले ठूलो माछा भेटाएकै हो त ?
Published on: 18 April, 2019 3:15 pm
अख्तियार दुरुपयोग आयोगले फाइनल्ली ठूलो माछा भेट्टाएको छ । सबैको गुनासो थियो कि अख्तियार किन ठूला माछा समाउँदैन । अन्ततः अख्तियारले ठूलो माछा भेट्टाएरै छोड्यो र ती ठूला माछा हुन उपसचिव प्रेम सञ्जेल ।
लेखा परीक्षणबाट टुंगिएको बिषयवस्तुलाई आधार बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रम कार्यालय विराटनगरमा कार्यारत उपसचिव प्रेम सञ्जेललाई ३ दिन भित्र उपस्थित हुन पत्र काटेको छ ।
प्रारम्भीक सोधपुछ विना सीधै पत्र काटिएपछि सञ्जेललाई ठूला माछा मान्नुको विकल्प रहेन । अब आउनुहोस्, एकैछिन संजेलका कसुर बारे पनि चर्चा गराँै । अथवा उनी माथि लागेको आरोपबारे जानकारी लिउ । निर्वाचन कार्यालयमा हाजिर नै नभएको अवस्थामा प्रोत्साहन भत्ता लिएको आरोपमा उनीमाथी छानविन भएको हो ।
उनलाई काटिएको पत्रमा लेखिएको छ कि निर्वाचन आयोगको निर्णय र नियम विपरित प्रोत्साहन भत्ता, खाना खाजा भत्ता लिइ भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीको बारेमा निजसँग बुझ्नु पर्ने भएको । जानकारीहरुका अनुसार लेखा परीक्षणबाट टुंगिसेकेको बिषयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित नै हुँदैन । र विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार उनले लिएको प्रोत्साहन भत्ता, खाना, खाजा भत्ताको बिषय महालेखाल परीक्षकको कार्यालयले अडिट गरी टुङ्इयाइसकेको छ ।
त्यो पनि २ बर्ष अगाडि । संजेल यस कारण ठूलामाछा हुन कि उनले विभिन्न अनियमितताका बिषयमा ठूलो आवाज उठाउँछन् । सायद आवज ठूलो भएका कारण उनि ठुला माछामा गनिए कि ? यो हाम्रो सोझो अनुमान मात्रै हो ।
मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिव, उच्चपदस्थ कर्मचारी कसैलाई बाँकी नराखी ड्याङ कि ड्याङ बोल्ने बानीले सबका सबलाई आतंकित पारेपछि कसले छोड्छ । नत्र निर्वाचन आयोगका त्यत्रा वेथिती र अन्धाधुन्दा गरिएको खर्चको हिसाब नुहने, खोजविन नहुने अनि महालेखाले टुंगाएको बिषयमा भ्रष्टाचार विरोधीलाई पत्र काटिनुले सम्मानित अख्तीयारप्रति शंका गर्न पाउ भनि नम्र निवेदन गरौ कि भन्ने सोच्दै छु ।
गाडी हुँदा हुँदै करोडौंको गाडी किनिए, विना टेण्डर प्रतिस्पर्धा नै नगरी फाष्ट ट्र्याकमा काम गर्ने निहुमा करोडौको सामान खरीद भए । निर्वाचन सामाग्रीको प्रिन्टिङमा खुल्लमखुल्ला लुट चल्यो ।
यस्तो बिषयमा कसैको चासो भएन तर वेथितीमा खुलेर सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने व्यक्तिलाई चिठी काट्नु भनेको एउटा गतिलो मजाक बाहेक के हुन सक्छ ? घुसिया आयुक्त र सेटिङ मिलाउन चनाखो उच्च पदस्थ कर्मचारी बोकेर अख्तियारले यस्ता पत्र पठाउदा पत्र ड्राफ्ट गर्नेको हात काँप्छ कि काप्दैन भनेर हेर्न भएपनि अख्तियार जान मन छ ।
धेरै मानिसलाई लाग्छ कि अख्तियार, अदालतका बिषयमा बोल्दा विचार गर्नु पर्छ, नरम हुनु पर्छ, समग्रमा डर मान्नु पर्छ । यो सोच परिवर्तन हुन जरुरी छ । अदालत र अख्तियारका बिषयमा त जति खरो हुन सक्यो त्यति राम्रो । मात्र यति हो कि यि सम्मानित संस्थाहरुको विना कारण अपमान गर्नु भएन । यत्रा ट्याक्स छल्ने, अकुत कमाउने, राज्यकोषको दोहन गर्ने, भ्रष्टाचार माथि भ्रष्टाचार गर्ने, पदको चरम दुरुपयोग गरी देश देखि विदेशसम्म सम्पत्ति जोड्ने हजारौँ हजारलाई छोडेर एउटा प्रेम संजेललाई थर्काउने काम अख्तियारको प्राथमिकतामा परेको हो भने यही संरचनामा अख्तियारले माछा त के भुसुना पनि मार्दैन ।
देश सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने देशहरुको पंतिमा माथि पर्दा पनि भ्र्रष्टहरु देख्दै नदेख्ने अख्तियारलाई सचेत गराउन पनि खुट्टा कमाउनु प¥यो भने, डराई डराई, भाका मिलाई मिलाई, रिंगटा लाग्ने गरी घुमाएर बोल्नु प¥यो भने त यो मुखमा सियो धागो लगाए हुन्छ ।
चौतर्फी वेथिती र भ्र्रष्टाचार मौलाएको मुलुकमा प्रहरी र ससस्त्र प्रहरी भन्दा बढी संख्यामा अख्तियारमा कर्मचारीहरु चाहिन्छन् । देश कुनै युद्धमा छैन तर भ्रष्टाचारको भुमरीमा छ । यसर्थ बरु यो ससस्त्र प्रहरीलाई अख्तियार तिर गाभेर अख्तियारलाई ठूलो बनाऔँ ।
चोरी, डकैती, फिरौती, हत्या, हिंसा भन्दा कयौ गुणा बढी छ भ्रष्टाचार । बरु नेपाल प्रहरी र नेपाल आर्मीबाट पनि आवश्यक परे इन्टेलिजेन्सहरु अख्तियारमा तानौं । हुन त इच्छा शक्ति भए वा शक्तिको केन्द्रको दवाव र प्रभावमा नपरे अहिलेकै संयन्त्रबाट पनि प्रेम संजेल भन्दा ठूला माछा समात्न सक्षम छ अख्तीयार । प्रेम संजेल उदाहरण मात्र हुन ।
दोषी भए तीनलाई दया माया गर भनेको होइन, हाल्देउ जेल, अलि बढी नै बोलेर र मिनेट मिनेटमा चिठी लेखेर, मुद्धा हालेर र भएभरका सबलाई भ्रष्टाचारी देखेर बसी टिक्न दिदैनन् रे ।
मिडियाको एटेन्सनले अलि पुल्पुलिएका चाँही छन् रे, त्यो सुधारुन । तर अरर्बौ अरबको भ्रष्टाचारीका सारा फाइलमा धुलो जमाएर यो देशको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रेम संजेलको पछि लागेको हो भने जे पर्ला पर्ला भन्नै पर्छ, राम राम अख्तियार, धेरै आशा गरेकोमा क्षमा चाहन्छौं ।
इराकबाट अर्की नेपाली चेलीको सफल उद्धार
काठमाडौं । आफू इराकमा बेचिएको भन्दै एक युवतीले नेपाल फर्काइदिन गुहार माग्दै हामीलाई भिडियो पठाएपछि
अन्तरीक्षमा नेपाली स्याटलाइटः हल्ला र यथार्थ (भिडियाे)
काठमाडौँ । नेपालले पहिलो पटक अन्तरीक्षमा सहभागिता जनाएकामा खुसी हुने ठाउँ प्रशस्त भए पनि सन्तुष्ट
काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीको अर्को दादागिरी !
काठमाडौं । काठमाडांै महानगरपालिका नगर प्रहरी भाडाका गुण्डा जस्तै प्रयोग भइरहेका छन् । पावर र
आयात उच्च भएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो
काठमाडौं । आयातमुखि अर्थतन्त्र भएकाले विदेशी मुद्रा संचिति महत्वपूर्ण हुन्छ । तर निर्यातको तुलनामा आयात
महिला राष्ट्रिय फुटबलकाे दोश्रो खेलमा एपिएफ विजयी
All rights reserved by news24.net